MR MRT: Quotes (Dalai Lama) - ဆိုစကားများ (ဒလိုင်း လားမား)
Quotes (Dalai Lama) - ဆိုစကားများ (ဒလိုင်း လားမား)
အဓိကကျတဲ့ ဘာသာရေး အစဉ်အလာ အားလုံးမှာ အခြေခံအားဖြင့် တူညီတဲ့အချက် ပါရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ သနားကရုဏာ နဲ့ ခွင့်လွှတ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါတွေဟာ နေ့စဉ်ဘ၀ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်နေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ပျော်ရွှင်မှုဟာ အဆင်သင့် ပြုလုပ်ထားပြီးသား အရာတစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ အပြုအမူကနေ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အရာပါ။
တတ်နိုင်ရင် တစ်ပါးသူတွေကို ကူညီပါ။ မကူညီနိုင်ဘူးဆိုရင် အနည်းဆုံး ဒုက္ခမပေးပါနဲ့။
တစ်ပါးသူတွေကို ကူညီဖို့ လိုပါတယ်။ ၀တ်ပြုဆုတောင်း ပေးရုံတင် မဟုတ်ပါဘူး။ လက်တွေ့ဘ၀မှာ ကူညီရမှာပါ။ သူတစ်ပါးကို မကူညီနိုင်တော့ဘူးဆိုရင် အနည်းဆုံး အနေနဲ့ ဒုက္ခပေးတာကို ရပ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။
သက်ဝင်ယုံကြည်တာ တစ်ခုခု ဒါမှမဟုတ် ဘာသာတရား တစ်ခုခု ရှိတယ်ဆိုရင် ကောင်းပါတယ်။ မရှိပေမယ့်လည်း ရပ်တည်ရှင်သန်နိုင်ပါတယ်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ သနားကရုဏာတို့ဟာ လိုအပ်ချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇိမ်ခံစရာတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ မေတ္တာ ကရုဏာ မရှိရင် လူသားတွေ မရပ်တည်မရှင်သန်နိုင်ပါဘူး။
ဘာသာတရား မရှိလည်း ရှင်သန်နိုင်ပါတယ်။ ကမ္မဋ္ဌာန်းတရား မရှိလည်း ရှင်သန်နိုင်ပါတယ်။ လူသားဆန်တဲ့ ခံစားချက် မရှိရင်တော့ မရှင်သန်နိုင်ပါဘူး။
ဖြစ်နိုင်တဲ့အခါတိုင်း ကြင်နာပါ။ အမြဲတမ်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဘုန်းကြီးရဲ့ ဘာသာရေးက ရှင်းရှင်းလေးပါ။ အကြင်နာတရားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘုရားကျောင်းတွေ မလိုပါဘူး။ ရှုပ်ထွေးတဲ့ အတွေးအခေါ် ဒဿနတွေ မလိုပါဘူး။ ဘုန်းကြီးရဲ့ ဦးနှောက်နဲ့ နှလုံးသားတို့ဟာ ဘုန်းကြီးရဲ့ ဘုရားကျောင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုန်းကြီးရဲ့ ဒဿနကတော့ အကြင်နာတရား ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ပါးသူတွေ ပျော်စေချင်တယ်ဆိုရင် ကရုဏာတရားကို ကျင့်သုံးပါး။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ပျော်ရွှင်ချင်တယ်ဆိုရင် ကရုဏာတရားကို ကျင့်သုံးပါ။
သည်းခံခြင်းကို ကျင့်သုံးတဲ့ နေရာမှာ ရန်သူဟာ အကောင်းဆုံး ဆရာ ဖြစ်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေဟောင်းတွေ ကွယ်လွန်ကုန်ကြပြီ။ မိတ်ဆွေသစ်တွေ ပေါ်လာတယ်။ နေ့တွေရက်တွေလိုပါပဲ။ နေ့ရက်အဟောင်းတွေ ကုန်လွန်ပြီး နေ့ရက်အသစ်တွေ ရောက်လာတယ်။ အရေးကြီးတာက အဓိပ္ပာယ်ရှိအောင် လုပ်ဖို့ပါ။ အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်။ အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ နေ့တစ်နေ့။
အိပ်စက်ခြင်းဟာ အကောင်းဆုံးကမ္မဋ္ဌာန်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကောင်းမြတ်မှု အားလုံးတို့ရဲ့ အမြစ်အရင်းဟာ ကောင်းမြတ်မှုကို တန်ဖိုးထားခြင်းဆိုတဲ့ မြေလွှာထဲမှာ တည်ရှိပါတယ်။
ဘ၀ရည်ရွယ်ချက်ဟာ ပျော်ရွှင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်တွင်းအဇ္ဈတ္တ ငြိမ်းချမ်းအောင် မလုပ်နိုင်မချင်း အပြင်အပ ဗဟိဒ္ဓလောကမှာ ငြိမ်းချမ်ရေး မရရှိနိုင်ပါဘူးး။
မောဟ မင်းမူတဲ့ နေရာမှာ စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်လာနိုင်ချေ မရှိပါဘူး။
ဘာသာတရားကို ယုံကြည်သည်ဖြစ်စေ မယုံကြည်သည်ဖြစ်စေ၊ ဘ၀တစ်ဖန် ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းကို ယုံကြည်သည်ဖြစ်စေ မယုံကြည်သည်ဖြစ်စေ မေတ္တာအကြင်နာ နဲ့ သနားကရုဏာကို တန်ဖိုးမထားတဲ့သူရယ်လို့ မရှိပါဘူး။
ကိုယ့်ရဲ့ဇကို နားလည်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့အရည်အသွေးကို ယုံကြည်တယ်ဆိုရင် ပိုကောင်းတဲ့ ကမ္ဘာတစ်ခု တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။
Ref (18 May 2011):
Picture from (18 May 2011):
Posted by Ashin Acara. at 2:51 AM
Labels: 05. Quote - ဆိုစကား